निर्मला हत्या प्रकरण : अपराधी पत्ता लगाउने गजबको नयाँ उपाय !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
निर्मला हत्या प्रकरण : अपराधी पत्ता लगाउने गजबको नयाँ उपाय !
मिडिया डबली संवाददाता प्रकाशित : मङ्लबार, अशोज २, २०७५
काठमाडौं – कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या काण्डको अनुसन्धान गरिरहेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरीले अपराधी पत्ता लगाउन नसकेपछि देशभर आलोचना भइरहेको छ । नयाँ समितिले आशंकाको सुई नेपाली सेनातिर पनि तेस्र्याएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘निर्मलाको शव पाइएको स्थान नजिकै सेनाको ब्यारेक रहेछ, कतिपय सूचना सेनाबाटै घटना भएको हुनसक्छ भन्ने पनि आएका छन् ।’
तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट भएकै बेला साउन १० गते बाहिर निस्किएका सेनाको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको थियो । एक प्रहरीका अनुसार सेनाका केही जवानको मोबाइल नम्बर पनि अनुसन्धानका लागि सिआइबीको टोलीलाई उपलब्ध गराइएको थियो ।
निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या कसले गर्यो भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन । घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीको गल्तीका कारण अनुसन्धान झन्झटिलो बनेको प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ ।
झण्डै २ महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रहरीले निर्मला हत्याको सुराक प्राप्त गर्न सकेको छैन । प्रहरी अधिकारीले अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै आएका छन् । प्रहरीले शंकास्पद विभिन्न व्यक्तिहरुको ‘कल डिटेल’ हेरिरहेको बताइएको छ । प्रहरीले शंकास्पद व्यक्तिका टेलिफोन रेकर्डको विश्लेषण गर्ने काम समेत गरिरहेको छ ।
यसैबीच, हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा विभिन्न तहबाट संलग्न प्रहरी अधिकारीको मोबाइल जफत गरिएको छ । घटनामा प्रहरी अधिकारीहरुको भूमिकाबारे अनुसन्धान गरिरहेको डीआईजी (प्रस्तावित एआईजी) धिरु बस्न्यातको टोलीले कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टसहित १९ जनाको मोबाइल जफत गरेको हो ।
टोलीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमै बोलाएर तत्कालीन एसपी विष्टसहित कञ्चनपुर प्रहरीका १६ जना र सिआईबीका डिएसपी अंगुर जिसीसहित ३ जनाको मोबाइल तथा सिमकार्ड जफत गरेको हो । कञ्चनपुरबाट मुद्दा शाखामा कार्यरत प्रहरी, सिभिल टोलीमा खटिएका प्रहरी, मुचुल्का उठाउने कार्यमा रहेका प्रहरीलाई पनि काठमाडौं झिकाइएको छ ।
निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा संग्लन ६ जना प्रहरी यसअघि नै निलम्बनमा परिसकेका छन् । निर्मला बलात्कार र हत्या अभियोगमा प्रहरीले अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गरेका दिलिपसिंह विष्ट नक्कली अभियुक्त भएको पुष्टि भएपछि प्रहरी अधिकारीहरु निलम्बनमा परेका थिए ।
गत साउन १० गते घरबाट साथीको घरमा निस्किएकी भीमदत्त नगरपालिका २ महुलियाकी १३ वर्षीय किशोरी निर्मला पन्त साउन ११ गते उखुबारीमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् ।
‘प्रहरी अधिकारी र अन्य प्रहरीको मोबाइल कनेक्सनको अध्ययन, उनीहरुले केही डाटा मेटाएको भए त्यसको ‘रिकभरी’ गर्ने र कल डिटेलका लागि मोबाइल तथा सिमकार्ड जफत गरिएको हो,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने ।
अपराधी पत्ता लगाइदिन माग गर्दै पन्तका आमाबुवा काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न नेतासँग भेटघाट गरेका छन् । आमाबुवाकै सहभागितामा शनिबार काठमाडौंमा ठूलो आन्दोलन समेत भएको थियो ।